Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Lucuc na -agbasa » CDC na-ebelata akara ngosi COVID-19 nke Saint Lucia na ọkwa 1
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nzaghachi Saint Lucia na Covid-19 ọrịa na-efe efe iji hụ na usoro nchekwa na ụzọ aghụghọ iji mepee akụnụba ụwa, na-anata nlele nlebara anya n'ụwa niile. Forlọ Ọrụ Maka Nchịkwa Ọrịa (CDC) ugbu a belata akara ngosi COVID-19 nke Saint Lucia na nke kachasị ala, ọkwa 1, dịka otu n'ime naanị mba asatọ n'ụwa niile, na-ekwu na "n'ime ụbọchị 28 gara aga, okwu ọhụrụ nke COVID-19 na Saint Lucia belata ma ọ bụ kwụsie ike. ”
Otu August 21, nke AOL gosipụtara, "Ego ole ọ na-efu ibi na mba 15 na-enweghị COVID" ekwuola Saint Lucia dị ka mba # 2 n'ụwa nke nwere ike ịnye gị ọmarịcha ebe dị mma iji chere ọrịa na-efe efe .
Saint Lucia nabatara ụgbọ elu azụmahịa mbụ ya na July 9, yana usoro nke usoro iwu siri ike na ọnọdụ nke gụnyere pretesting n'ime ụbọchị asaa nke ịbịarutere ebe a, nyocha nyocha na mbata, ojiji nke tagzi na ụlọ nkwari akụ, ụbọchị iche ụbọchị 14. maka mba ndị na-enweghị afụ, iyi ihe mkpuchi na ọha ma na-elezi anya nke anụ ahụ.
Prime Minista Honorable Allen Chastanet kwuru na "Nke a bụ nkwado nke mmeri mba anyị na njikwa nke COVID-19." “Anyị ga na-agbaso usoro iwu anyị ma hụ na a na-eme nyocha tupu ndị ọbịa abata na Saint Lucia. Nke a na-achọ nkwado na nkwado nke ndị niile nwere oke aka na njem njem a. ”
Ndị ọrụ njem njem nlegharị anya nke Saint Lucia na Ministri na-ahụ Maka Njem Nleta toro nkwado ahụ dị ka oge kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ na-agba ndị ọbịa ume ịnwe ogologo oge na mmefu ego dị ọnụ ala.
Onye isi oche nke Kọmitii Na-ahụ Maka Nchịkwa COVID-19 na Minista maka njem nleta, Honorable Dominic Fedee kwuru, “Ọ bụ ihe ùgwù ịhụ na ụzọ dị mkpa maka ịmaliteghachi mpaghara ndị njem, nraranye na ịchụ àjà nke gọọmentị, ndị ọrụ na-aga n'ihu na nkwado nke ọha na eze bụ isiokwu na mpaghara ụwa. Ihe niile gọọmentị lebara anya na-eme ka a hụ na e weghachiri ihe ndị e ji ebi ndụ ebe ha na-echebe ndị obodo pụọ na nje a. ”
Gọọmentị nke Saint Lucia site na ika Caribcation na-arụ ọrụ na-enweghị isi iji webata usoro mmemme ya gbatịrị agbatị ebe ndị ọbịa ga-enwe ike ịrụ ọrụ, nọrọ ma kpọọ, mgbe niile na-anụ ụtọ ọdịbendị Saint Lucia. Maka oge nke Julaị ruo Ọgọstụ 2020 ruo taa, Saint Lucia anabatala ndị njem 5,897 site na ọdụ ụgbọ mmiri nnabata akwadoro, nke 4,413 bụ ndị ọbịa.
N’ichepụta ụzọ a ga-esi mee atụmatụ nke abụọ a ga-ebido n’Ọktọba, gọọmentị na ndị ọrụ Ahụike na-aga n’ihu na-esepụta usoro ha ga-eme nke ga-aga n’ihu ichebe ndị mmadụ. Site n'iji nlezianya mee ihe, site na Mọnde July 17, ọrụ ndị ọzọ na-adabere na mmiri emeghewo gụnyere mmiri mmiri na snorkeling.
A na-echetara ọha na eze ịgbaso njem niile na usoro agwaetiti dị ka usoro na-aga n'ihu na mbenata ihe ize ndụ nke COVID-19 n'ime obodo. A na-echetakwara ndị bi na nche ka ha kpachara anya ma kọọ mmebi iwu ọ bụla mara na ekwentị 311 ma ọ bụ ọdụ ndị uwe ojii kacha nso.